Pradaxa - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pradaxa
Generic Name: Pradaxa Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pradaxa ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pradaxa ဟာသွေးခဲတွေဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးပေးတဲ့သွေးကျဲဆေး(Thrombin ကိုတားဆီးပေးတဲ့ဆေး)တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Pradaxa ဟာ atrial fibrillation လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာလေဖြတ်ခြင်းနဲ့သွေးခဲခြင်းတို့ရနိုင်ချေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။
Pradaxa ကိုသင့်ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးပြန်ကြောတွေမှာသွေးခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခြင်း(DVT) သို့မဟုတ် အဆုတ်မှာသွေးခဲတွေရောက်ခြင်း(PE)တို့ကိုကုသဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုပါတယ်။ အဲဒီရောဂါတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်ချေကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။
Pradaxa ကိုသင့်ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတိအကျသောက်ပါ။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ ယခုဆေးကိုဆေးပမာဏတိုးသောက်ခြင်း၊လျော့သောက်ခြင်းနဲ့သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ထက်ပိုသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဆေးကိုအမှုန့်ချေခြင်း၊ဝါးစားခြင်း၊ချိုးဖဲ့ခြင်း၊ဆေးတောင့် ကတ်ပ်ဆူးကိုဖွင့်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဆေးတောင့်ကတ်ပ်ဆူးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်းသောက်ပါ။
Pradaxa ဟာသွေးထဲမှာမလိုလားအပ်တဲ့သွေးခဲတွေဖြစ်မလာအောင်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲအတွက်ကြောင့်ပဲယခုဆေးဟာချော်လဲခြင်း၊ဦးခေါင်းကိုဆောင့်မိခြင်းစတဲ့အသေးစားဒဏ်ရာတွေမှာတောင်သင့်ကိုအလွယ်တကူသွေးထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ချော်လဲရင်သို့မဟုတ်ဦးခေါင်းထိခိုက်မိလျှင်သို့မဟုတ်အခြားသွေးမတိတ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါကဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ခွဲစိတ်ခြင်း၊သွားနှုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးစစ်မှုများကုသမှုများလိုအပ်ပြီဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၁၂နာရီအတွင်းကသင် Pradaxa ဆေးကိုသောက်ထားတယ်ဆိုပါကသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ သင့်အနေနဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆေးကုသမှုခံယူခြင်းများမပြုလုပ်မီယခုဆေးသောက်ခြင်းကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာရပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ Pradaxa သောက်ခြင်းကိုမရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ခြင်းဟာသင့်မှာလေဖြတ်နိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ တကယ်လို့သင်Pradaxa ဆေးသောက်တာကိုရပ်ဖို့လိုပြီဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်ကသွေးခဲတွေဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးဖို့အတွက်အခြားဆေးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးတောင့်ကတ်ပ်ဆူးတွေကိုမူလဆေးထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာသို့မဟုတ်ဆေးကတ် ထဲတွင်သိမ်းပါ။Pradaxa ဆေးတောင့်ကတ်ပ်ဆူးတွေကိုနေ့စဉ်သုံးဆေးသေတ္တာသို့မဟုတ်ဆေးတွေစုထည့်ထားတဲ့ဘူးထဲကိုမထည့်ပါနဲ့။
Pradaxaကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Pradaxa အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းပုံလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Pradaxaကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pradaxa အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် – အကယ်၍သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆေးကိုမဆို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။
Pradaxaသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများ တွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
NSAID(steroid မပါတဲ့အရောင်ကျဆေး)တစ်မျိုးမျိုးဥပမာibuprofen(Advil,Motrin),naproxen(Aleve),diclofenac,indomethacin,meloxicam နဲ့အခြားဆေးများကိုပုံမှန်သောက်သုံးနေခြင်း။
Pradaxa ဟာသင်ခါးဆစ်ရိုးဖောက်လျှင်သို့မဟုတ်ခါးဆစ်ရိုးနားကိုမေ့ဆေးထိုးခြင်းတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့spinal cord ပတ်ပတ်လည်မှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့သွေးခဲဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသွေးခဲအမျိုးအစားဟာသင့်မှာအောက်ပါအခြေအနေတွေရှိနေပါကနာတာရှည်လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့spinal cord မှာပိုက်သွင်းထားခြင်း။
သင့်မှာယခင်ကspinal cordကိုခွဲစိတ်ထားဖူးခြင်း သို့မဟုတ်မကြာခဏခါးဆစ်ရိုးဖောက်ရခြင်း။
NSAID တစ်မျိုးမျိုးဥပမာ Advil,Aleve,Motrin နဲ့အခြားဆေးများကိုသုံးနေခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pradaxa ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPradaxaကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Cလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Pradaxa ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တကယ်လို့သင့်မှာPradaxa နဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့အောက်ပါလက္ခဏာတွေရှိနေပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။ အရေပြားတွင်အဖုအပိန့်များထွက်လာခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်ထဲတွင်တင်းကြပ်နေသလိုခံစားရခြင်း၊အသက်ရှူစဉ်တရွှီရွှီသံကြားရခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊သင့်ရဲ့မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာနဲ့လည်ချောင်းများရောင်ရမ်းခြင်း။
Spinal cord မှာသွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အောက်ပါလက္ခဏာတွေခံစားရပါကလည်းအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။ ကျောအောင့်ခြင်း၊သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်အောက်ပိုင်းကကြွက်သားများထုံခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊ဆီးဝမ်းများမထိန်းနိုင်တော့ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Pradaxa နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pradaxaကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pradaxa နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pradaxa နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pradaxaဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pradaxa ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
CrCl 30mL/min အထက်အတွက်:ဆေး၁၅၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
CrCl 15မှ30mL/min အတွက်:ဆေး၇၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
CrCl 15mL/min အောက်သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်မကောင်းလျှင်:သောက်ရမယ့်ဆေးပမာဏကိုညွှန်ကြားထားခြင်းများမရှိပါ။
CrCl 30မှ50mL/min အထိဖြစ်ပြီးP-gp inhibitorsများတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမယ်ဆိုလျှင်:P-gp inhibitors တွေဖြစ်တဲ့ dronedarone သို့မဟုတ် systemic ketoconazole တစ်ခုခုနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုပါကဆေး၇၅မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
CrCl 30mL/min အောက်ဖြစ်ပြီးP-gpinhibitorsများတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမယ်ဆိုလျှင်:ဆေး၂ခုတွဲသောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
DVT နဲ့ PE ရောဂါများကုသခြင်းအတွက်
DVT နဲ့ PE ရောဂါများပြန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ချခြင်းအတွက်
တင်ပါးဆုံရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် DVT နဲ့ PEရောဂါများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်အတွက်
CrCl 30mL/min အထက်ဖြစ်ပါကပထမနေ့မှာဆေး၁၁၀မီလီဂရမ်ကိုသောက်ပါ။ အဲနောက်ဆေး၂၂၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Pradaxa ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများအတွက်ဆေးပမာဏသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက်ဆေးကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုမသုံးခင်ဆေးကြောင့်အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးတောင့်ကတ်ပ်ဆူးပုံစံ:dabigatran etexilate mesylate ၇၅မီလီဂရမ်
Pradaxaဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 23, 2019
Pradaxa®. https://www.drugs.com/pradaxa.html. Accessed August 8, 2017
Pradaxa®. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-154839/pradaxa-oral/details. Accessed August 8, 2017
ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနည်းများ
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း
သင့်သွေးက ဘာအမျိုးအစားလဲ။ ဘယ်လိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများလဲ ။ ။